प्यूठान अस्पतालमा फिजियोथेरापी सेवा सुरु – AayoMail
प्यूठान अस्पतालमा फिजियोथेरापी सेवा सुरु
आयाेमेल संवाददाता २०७७ असार २८ गते ११:२३
प्यूठानको जिल्ला अस्पतालमा प्रदेश ५ सरकारले फिजिओथेरापी सेवा सुरु गरिएको छ। आइतबार फिजियो थेरापी सेवाको प्रदेश ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले शुभारम्भ गरेका छन्। यससँगै प्यूठान अस्पताल प्रदेश ५ का १२ वटा जिल्ला अस्पतालमध्ये फिजिओथेरापी सेवा सुरु गर्ने पहिलो अस्पताल बनेको छ।
शुभारम्भ कार्यक्रमका अवसरमा मन्त्री बरालले फिजिओथेरापी सेवाले ग्रामीण क्षेत्रका विरामीका लागि सेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले जिल्ला अस्पताललाई प्रदेश सरकारले ५० सैय्या स्तरोन्नती गरी सुविधा वृद्धि गर्ने बताए। उनले सेवाभावमा समर्पित भई विरामीको सेवा गर्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई निर्देशन दिए।
अस्पतालका मेसु डा. अमृत पन्थीले प्रदेश सरकारको सहयोगमा फिजिओ थेरापी सेवा सुरु गरिएको जानकारी गराए। डा. पन्थीका अनुसार फिजिओ थेरापीमा मुख्यगरी ढाड दुखेको, बाथ र मांशपेशी सम्बन्धी उपचार गरिनेछ। उनले प्रदेशका १२ वटा जिल्ला अस्पतालमध्ये प्यूठान जिल्ला अस्पताल फिजिओथेरापी सेवा सुरु गर्ने पहिलो अस्पताल बनेको बताए।
सेवा सुरु गर्नका लागि प्रदेश सरकारले भवन र उपकरणका लागि सहयोग गरेको छ।